Voaloko Al Coil
Tianjin Liwei vy & vy mpiara., Ltd dia naorina tamin'ny 2002, ka voasoratra anarana ao amin'ny Tianjin Airport Industry Park. Ny tena raharaha Liwei dia eo amin'ny sehatry ny orinasa mpamokatra entana, sy ny fanapariahana ny fikarakarana vy vokatra. Products dia vaky ho telo toko: vy amin 'ny takelaka, fantsona vy sy ny vy rebar. Vy amin 'ny takelaka dia ahitana mangatsiaka nanakodia vy coil (CRC), mafana nanakodia vy coil (HRC) poakaty, ny tafo vy coil (GI) prepainted tafo sy ny vy coil (PPGI). Fantsona vy dia ahitana ERW fantsona, fantsona mainty ambonin'ny poakaty, ny tafo fantsona, miray volo fantsona, fantsona firaka sy ny sisa.
Tsy mizara ny vokatra vy ao an-toerana sy any ampitan-dranomasina na tsena. Ao amin'ny tsena eo an-toerana, ny mpandraharaha isika miaraka amin'ny vy lehibe fikosoham-bary ao anatin'izany vondrona Baotou vy, Hebei vondrona vy, Tiantie vondrona vy. Sy mizara mihoatra ny 50.000 taonina CRC, GI sy PPGI isan-taona. Ny mpanjifa an-toerana dia niparitaka manerana ny faritany any Avaratra Shina, ary efa nitandrina ny fiaraha-miasa mandritra ny fotoana maharitra aminay.
Ny orinasa nahatratra ny fankatoavana ny fanafarana sy fanondranana amin'ny taona 2008, ary ny raharaham-barotra fanondranana mitombo ankehitriny. Ny vokatra katalaogy ho an'ny fanondranana dia ahitana ny CRC, GI, PPGI, Tinplate sy fantsona vy. Mpanjifa avy any Eoropa Atsinanana, Amerika Atsimo, Mideast sy Afrika dia ho nampitoetra ny tranon'omby sy lavitra ezaka fandraharahana fifandraisana aminay. Mampanantena isika ny mpanjifa ny toetra tsara indrindra, mahay mandanjalanja vidiny sy lahateny avy hatrany.
"Marina, tsy fivadihana, Trust sy Fanajana" no raharaha fepetra. Tsy miandry fatratra manome ny tsara indrindra vokatra sy ny tolotra rehetra-baraka ny mpanjifa.
Ny fandresena-fandreseny lalao eo amin'ny orinasa sy ny mpiasa, orinasa ary mpanjifa no mihazakazaka lasibatra. Manantena izahay azontsika atao mba fizarana izay hahasoa ny fiaraha-monina iray manontolo araka ny fahombiazan'ny ny raharaham-barotra.
2-2-1404, No. 2, Chuangxinliulu, Huayuan Hi-Tech Industrial Park, Tianjin, 300384, Sina